Siddee ayuu ninkan 24 jeer doorasho ugu guul daraystay? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Omkar Khandekar
Doorasho kasta oo ka dhacda Hindiya, musharraxiinta ku guul darreysta waxaa ugu badan kuwa usoo istaaga si madax bannaan, Omkar Khandekar ayaa ka warbixinaya nin 24 sano guul daraystay balse diiday inuu ka niyad jabo ama ka quusto inuu isasoo sharraxo.
Vijayprakash Kondekar caan ayuu ka noqday gobolka uu ka soo jeeda ee Shivaji Nagar.
Labadii bilood ee la soo dhaafay, ninkan oo 73 sano ah ayaa waday o'lole doorasho uu ku raadinayay taageero.
"Waxaan rabay inaan dadka u xaqiijiyo in siyaasadda xisbiyada kaliya aysan ahayn midda dimuqraadiyadda ah, waxaan qorshaynayay in dalka maamulkiisa ay helaan musharaxiin xisbi aanan ka soconin, sida aniga oo kale, taasina waa habka kaliya ee aan musuqmaasuqa ku yarayn karno", ayuu yidhi.
Mr Kondekar waxa uu u taaganyahay kursiga baarlamaanka oo lagu wado inay codayntiisa bilaabato 23-ka bishan Abriil.
Mr Kondekar ayaa tartamaya xisbi la'aan, wuxuuna rajaynayaa inuu maalin uun noqon ra'iisul wasaare.
Haddii ay taasi dhacdo, waxa uu sheegay in muwaadin kasta oo u dhashay Hindiya uu siin doono 245 doolar.
Waxa uu ka mid yahay boqollaal musharaxiin ah oo doorashadan ka qayb galaya iyaga oo aanan xisbi ku tiirsanayn.
Sannadkii 2014-kii, saddex qof oo ka mid ah 3 kun oo musharaxiin madax bannaan ah oo kaliya ayaa doorashada ku guulaystay.
Balse Mr Kondekar ayaa sheegay inuu helay istaraatijiyad cusub oo ka caawin karto doorashadan.
Sharciga doorashada u yaalla ayaa ah, in musharaxiinta ka socda xisbiyada qaranka la siiyo fursadaha ugu horreeya halka kuwa madaxa bannaana laga dhigo kuwa ugu dambeeya.
Codaynta lagu wado inay dhacdo maalinta Talaadada, waxa uu magaciisa ku badelay Znyosho, si uu magaciisa u noqdo midka ugu dambeeyo liiska.
Marka laga soo tago caqabadaha ay wajahaan musharaxiinta u tartama sida madax bannaanida ah ayaa xisbiyada waxa ay abuuraan kala qaybsanaan dhanka codadka ah taasi oo ah musuqmaasuqa ka jira dhanka tirinta codka, sida uu sheegay Mr Kondekar.
Waxaa jira nidaamyo badan oo dhibaato ku ah musharaxiinta madaxa bannaan, sida xilliyada uu socdo ol'olaha doorashada, iyadoo aysan helin taageero ku filan ama dhaqaale ay ku sameeyaan o'lole ku filan.
"Musharaxiinta ay ka go'antahay inay isbadel keenaan balse aanan haysanin kharash ku filan, taageero ay ku gaaraan dad badan iyo qaabka ay shacabka u arkaan xisbiyada waaweyn."
Balse Mr Kondekar isaga oo og dhibaatooyinka hor yaalla, horayna iskudayadiisii ugu guul daraystay ayey weli ka go'an tahay inuu isa soo sharraxo.
"Waa tartan u dhexeeya xisbiyada siyaasadda iyo annaga, balse waxaan rabaa inaan isku dayo inaan ka guuleysto. Marka la eego da'dayda tan waxay noqonaysaa doorashadii ugu dambaysay. Balse waxaa laga yaaba inay markaan wax isbadelaan", ayuu yidhi.